Asan-jiolahy tany Nosy Be :: Noraisim-potsiny ilay mpanafika niantefan'ny taim-bala • AoRaha
Asan-jiolahy tany Nosy Be Noraisim-potsiny ilay mpanafika niantefan’ny taim-bala
Mora tamin’ny mpitandro filaminana ny fikarohana ny andian-jiolahy nanafika tany Marodoka Nosy Be, tamin’ny alin’ny sabotsy lasa teo. Tratra voalohany ny iray tamin’ireo mpanafika izay naratra nipitihan’ny taim-bala.
Tratra, taorian’izay, ny namany roa hafa sy ny mpiray tsikombakomba tamin’izy ireo. Voatazona am-ponja vonjimaika, afak’omaly, ireo rehetra voarohirohy ireo.
«Dimy lahy no nanafika, tamin’io alina io. Novakiana tamin’ny hazo sy vato ny varavaran’ny trano. Nanapoaka basy ny tompon-trano. Basim-borona no nampiasainy ka niantefan’ny piti-bala ny iray tamin’ireo olon-dratsy. Nandositra izy ireo avy eo. Tsy nisy ny entana voaroba», hoy ny polisy any Nosy Be.
Nampandrenesina avy hatrany ny tany amin’ny hopitaly amin’ny fisiana olona naratra voan’ny bala. Niainga teo ny fikarohana. Fantatra ny mombamomba an’ilay maratra. Noraisim-potsiny izy, tamin’ny alatsinainy lasa teo. Voasambotra ihany koa ny namany sasany.
Lozam-pifamoivoizana :: Tovolahy, 21 taona, maty nazeran’ny môtô